राजनीति Archives - Page 91 of 97 - Sawal Nepal
स्मार्ट सिटी बनाउन नसके राजीनामा दिन्छौ ?
राजविराज (सप्तरी) । मधेस आन्दोलनको थलो सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा दलहरु बीच चुनाव जित्न प्रचारको होडबाजी चलेको छ । उमेदवार आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र र आ–आफ्ना व्यक्तिगत प्रतिवद्धतसहित प्रचारमा होमिएका छन् । मधेस आन्दोलनका नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको नामले सप्तरीको राजविराज परिचित छ । यसअघि दुई चरणको निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको आधार केन्द्र मानिने
राप्रपाका सांसद दुई पार्टीमा बाँडिए, को कुन पार्टीमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजति भएपछि राप्रपाका ३६ सांसद अलग अलग पार्टीमा बाँडिएका छन्। तर, कुन पार्टीमा कति सांसद छन् भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। सांसदहरू लीलादेवी श्रेष्ठ र राजेश्वरीदेवी शाहको कुन पक्षमा भन्ने विवादित भएको छ। निर्वाचन आयोगले उनीहरूको नाम पशुपतिशम्शेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा राखिदिएको छ। श्रेष्ठ र शाहले भने आफू कमल थापाको पक्षमा
राणाले गरे राप्रपा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा, अब के होला?
पार्टी विभाजन पछि काठमाडौंको चावहिलमा रहेको राप्रपा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय नवगठित राप्रपा प्रजातान्त्रिकले कव्जा गरेको छ । पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वमो राप्रपा प्रजातान्त्रिकले साविकको राप्रपाको कार्यालयमा कव्जा जमाएको हो । राणाले दान गरेको जग्गामा राप्रपाको पार्टी कार्यालय बनेको थियो । राप्रपा एकीकरण भएपछि धुम्बराहीमा रहेको राप्रपा नेपालको कार्यालयमा रहेको कमल थापाको कार्यकक्ष चावहिलमा सारिएको थियो ।
कुलमानले गरिदिए केपी ओलीले ल्याएको योजना सही भएको पुष्टि !
भर्खरै मात्र मुलुकले पत्याएका एकजना सरकारी अधिकारीले केही वर्षअघि केपी ओलीले गरेको भविष्यवाणीलाई सत्य सावित हुनेगरी एउटा तथ्यपरक विषयको खुलासा गरिदिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावनाबारे एउटा नयाँ तथ्य खोलिदिएका हुन् । निर्देशक घिसिङले नेपालमा पानी जाहाज चलाउन सक्ने सम्भावनाबारे ३२ वर्षअघि नै अध्ययन भैसकेको
केपी ओलीको कडा विश्लेषण: संबिधान संसोधनको प्रस्ताव खतरा
सरकारले संविधान संशोधन अघि बढाई तराई केन्द्रीत दललाई समझदारीमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बेला नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको संविधान संशोधन खतरनाक भएको बताएका छन् । उनले संशोधन प्रस्ताव गलत नियतका साथ आएको भन्दै त्यसलाई खतरनाकको संज्ञा दिएका हुन । उनले भने, ‘यो खतरनाक छ, संविधानको धारा ६ मा संशोधन भनेको छ । त्यो
देउवा झस्कने गरी ओली यशो भनेपछि , देउवालाइ होला स्वीकार !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा बोलेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको जनमत आएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गर्दै आएको एमालेका अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा वकालत गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरुलाई पनि आग्रह गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट शुक्रबार बाहिरिने
राजनीतिक विवादका कारण जलबिद्युतमा असर
– भोबिन्द्र शाह बैशाख । बाजुरामा राजनैतिक बिबादका कारण कोटिला साना जलबिद्युतमा आएको योजना प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको छ । कोटिला साना जलबिद्युतको नहर निर्माणका लागी निर्बाचन क्षेत्र बिकास कोष बाजुराबाट १० लाख रुपैया बिनियोजित भएको भएपनि एमाले काँग्रेस र माओबादि केन्द्रका कार्यकर्ताबीच उपभोक्ता समिति आफ्नो पाटीले पाउनुपर्ने भन्ने बिबादले योजना सम्झौता हुन नसकेको कोटिला जलबिद्युत
राप्रपाले सबै धर्मलाइ समान ब्यवहार तथा छूवाछूत र मन्दिर प्रवेसमा बिभेद हुन नदिने( हेर्नुहोस भिडियो)
राप्रपाले सबै धर्मलाइ समान ब्यवहार तथा छूवाछूत र मन्दिर प्रवेसमा पूर्ण बिभेद हुन नदिने कमल थापाले दमकमा आएर दिएको दमदार भाषण सुन्नुहोस । भिडियो र तस्विर बिष्णुप्रसाद पोखरेल( हेर्नुहोस भिडियो)
युवा संघ अब हातमा दहि जमाएर नबस्ने
युवा संघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष राजिब पाहारीले दुई चरणमा चुनाव गराउने कुरा चुनाब टार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै किस्तामा गरिने चुनाबको युवा संघले कडा प्रतिबाद गर्ने बताएका छन । उनले हिजो दुई चरणमा चुनाब गर्न भएको भनिएको सहमती कुनै हालतमा स्विकार्न नसकिने भन्दै नेपाललाई सिक्किमिकरण गर्न खोजिएको बताए । नेकपा एमालेको लोकप्रियता देखेर अत्तालियाका केही देशि
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डीएस खम्बु सहित एमालेमा प्रवेस
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डीएस खम्बु, ११ जना केन्द्रीय सदस्यसहित एक हजार जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले सो पार्टी परित्याग गरी आज सामुहिकरुपमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । खम्बुवान मोर्चा पूर्वको क्षेत्रीय पार्टी हो । सो पार्टीबाट संसदमा एकजनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार खम्बु सांसद बनेका हुन्